एकलकेयर बचत SpartanNash फार्मेसीहरूमा उपलब्ध छ - कम्पनी | सेप्टेम्बर 2021
प्रेस कल्याण समुदाय, कम्पनी समाचार, कल्याण कम्पनी, औषधि जानकारी कम्पनी, चेकआउट औषधि जानकारी, समाचार भारी खेल समुदाय, कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर चेकआउट औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी कम्पनी, समाचार औषधि बनाम मित्र
मुख्य >> कम्पनी >> सिंगलकेयर बचत अब पारिवारिक भाँडा, मार्टिनको सुपर मार्केट, D&W फ्रेश, र अधिक स्पार्टननेश ब्रान्डमा उपलब्ध छ।
सिंगलकेयर बचत अब पारिवारिक भाँडा, मार्टिनको सुपर मार्केट, D&W फ्रेश, र अधिक स्पार्टननेश ब्रान्डमा उपलब्ध छ।
यद्यपि स्पार्टननेश नाम तपाईंलाई परिचित हुन सक्दैन, यदि तपाईं उत्तर र मध्यपश्चिमीमा बस्नुहुन्छ भने, यो सम्भवतः तपाईंले उनीहरूको खुद्रा ब्रान्डहरू मध्ये एकमा शपिंग गर्नुभयो। किराना स्टोर चेनको सबैभन्दा लोकप्रिय नामहरूमा इकोनोफुडहरू र मार्टिनको सुपर मार्केटहरू छन्। शुभ समाचार? तपाईं अब कुनै पनि स्पार्टननाश ब्रान्डमा एकलकेयर बचत पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ जुन फार्मेसी समावेश गर्दछ, जस्तै पारिवारिक किराया फार्मेसी, डी एन्डडब्ल्यू फार्मेसी, वा VG फार्मेसी।
यदि तपाईंले कहिल्यै सिंगलकेयर प्रयोग गर्नुभएको छैन, वाaफार्मेसी छुट कार्ड , सुरु गर्न राम्रो समय कहिल्यै थिएन! यसले केवल तीन सरल चरणहरू लिन्छ:
म कती भिटामिन डी लिन सक्छु?
मा तपाईंको औषधि खोजी गर्नुहोस् singlecare.com वा हाम्रो अनुप्रयोगमा, जुन तपाईं डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ App Store वा मा गुगल प्ले ।
एकचोटि तपाईंले स्पार्टननाश कुपन फेला पार्नुभयो भने, तपाईं प्रिन्ट गर्न, पाठ पठाउन वा आफै ईमेल गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईं अनुप्रयोग प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, यसले तपाईंको फोनमा कुपन बचत गर्दछ।
तपाईंको फार्मासिष्टलाई कूपन देखाउनुहोस् जब तपाईं आफ्नो प्रिस्क्रिप्शन भर्नुहुन्छ वा तपाईंको अर्डर लिनुहुन्छ!
तपाईं नजिक एक SpartanNash स्थान छ भने आश्चर्य? कम्पनीले १ Indian० भन्दा बढी स्टोरहरू इण्डियाना, आयोवा, मिशिगन, मिनेसोटा, नेब्रास्का, नर्थ डकोटा, ओहियो, दक्षिण डकोटा, र विस्कॉन्सिनका संचालन गर्दछ। ब्रान्डको खुद्रा ब्यानरहरूले समावेश गर्दछ:
D&W ताजा बजार
परिवार ताजा बजार
वन हिल्स फूड्स
मार्टिनको सुपर मार्केटहरू
एकलकेयर प्रयोग गर्न तयार हुनुहुन्छ र अझ धेरै बचत गर्न चाहानुहुन्छ? हाम्रो सदस्य बचत कार्यक्रममा समावेश विचार गर्नुहोस्। साइन अप नि: शुल्कका लागि अब next receive प्राप्त गर्न तपाईंको अर्को योग्य प्रिस्क्रिप्शनबाट। एकचोटि तपाईं सदस्य भएपछि, तपाईं अधिक बोनस बचत योग्य Rx भर्नको साथ अर्जित गर्नुहुनेछ already पहिले नै छुट भएका प्रिस्क्रिप्शनहरूमा!
तपाइँ किन घाम बाट टाढा रहनु पर्छ जब एन्टिबायोटिक लिनु हुन्छ
आज बचत सुरू गर्नुहोस्!
कति समय सम्म तपाइँ सुरक्षित phentermine लिन सक्नुहुन्छ
एंटीबायोटिक cefdinir के को लागी प्रयोग गरीन्छ
claritindतपाइँको प्रणाली मा कहिले सम्म रहन्छ?
के तपाइँ मधुमेह बिना रक्त शर्करा कम गर्न सक्नुहुन्छ?
के म एकै समयमा zyrtec र claritin लिन सक्छु?